Twitch Prime အခမဲ့ဂိမ်းများ - ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ - ဂိမ်း
Twitch Prime ကို Amazon မှပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာပေးဆောင်အသင်းဝင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် Twitch Prime တွင်လစဉ်အခမဲ့ဂိမ်းများရှိသည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။Twitch Prime သည်သုံးစွဲသူများအားလစဉ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပြီးအခမဲ့ဂိမ်းများကိုပေးသည်။
Twitch ချုပ်စာရင်းသွင်းမှုတွင်ပါဝင်သည် အမေဇုံချုပ် သို့မဟုတ်ပင် ဗီဒီယိုအသင်း ၀ င် ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤပလက်ဖောင်းတစ်ခုခုကိုစာရင်းသွင်းပြီးပါကအခမဲ့ဂိမ်းများကိုရယူရန်သင်၏ Amazon နှင့် Twitch အကောင့်များကိုသာချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
Twitch Prime မှာယူမှုသည်သင့်အား Twitch လိုင်းများမှတစ်ဆင့်ရွေးချယ်စရာများ၊ စိတ်ခံစားမှုများ၊ ကြော်ငြာများကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်စေရုံသာမကဘဲ။ ဒါပေမယ့်လစဉ်လတိုင်းအခမဲ့ဂိမ်းများ။
ဒီတစ်ခုကတော့အာကာသ - သင်္ဘောပျော်စရာပါ။ ၎င်းသည်ယခုလအခမဲ့ဂိမ်းများနှင့်လည်းပါ ၀ င်သည့် Pulstar ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ဒီဂိမ်းမှာတော့အားသာချက်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အာကာသယာဉ် (၆) ခုကိုသင်ရွေးရပါမယ်။ ပြီးတော့ Remuria နဲ့ Mutras ဂြိုလ်များအကြားဖြစ်ပျက်မယ့်အဆုံးမဲ့စစ်ပွဲကိုသင်ဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ Fatal Fury အထူး
သငျသညျ retro တိုက်ပွဲများဂိမ်းများကိုချစ်လျှင်, ငါတို့သည်သင်ဤဂိမ်းနှင့်အတူချစ်ကြလိမ့်မည်သေချာပါသည်။Fatal Fury Special တွင် retro vibe နှင့်ထူးခြားသောစတိုင်တစ်ခုရှိပြီး Street Fighter ကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိရစေသည်။ဒီဂိမ်းကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာပြန်ပြီး Fatal Fury2မှဇာတ်ကောင်ရှစ်ယောက်ပါ ၀ င်သည်။
Fatal Fury Special သည်တိုက်ခိုက်သူ ၁၅ ဦး ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တိုက်ခိုက်သည်။ဤဂိမ်းသည်သင်၏အချိန်နှင့်ထိုက်တန်သောကြောင့်သင်ဤဂိမ်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်မည်မှာသေချာသည်။
3. မက်စ်: ညီနောင်များ၏ကျိန်စာ
မက်စ်သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုကျော်လွှားရန်ပဟေsolvingိဖြေရှင်းသည့်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ဤဂိမ်းသည်လုပ်ရပ်များအပြင်ဖန်တီးမှုပဟေsolvingိဖြေရှင်းခြင်းများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။
မက်စ်ကို Magic Marker တပ်ဆင်ထားသည်။ သူ၏ကလေးအစ်ကိုဖေလဇ်မင်းအားကယ်တင်ရန်ကမ္ဘာတစ်ခွင်ရှိအလှည့်တိုင်း၌ဘေးဥပဒ်များအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ရမည်။
4. Fighters of King 2002
ဒီဂိမ်းကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Quick Evasion နှင့် Max Activation နည်းစနစ်များဖြင့်လာသည်။King Of Fighters 2002 ဂိမ်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အလွန်ချီးမွမ်းထားသည်။
ဒီဂိမ်းမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့နည်းစနစ်တွေရှိတယ်။ စစ်သည် ၁၅ ယောက်သည်သံမဏိကိုသံကြိုးဖြင့်တုပ်နှောင်။ ခြံစည်းရိုးပွဲများကျင်းပကြသည်။ မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဟက်ပြီးဖျက်ဖို့ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေနဲ့ Fury အသစ် feints တွေကိုသုံးနိုင်တယ်
Twitch Prime သုံးစွဲသူများသည်လစဉ်အခမဲ့ဂိမ်းများကိုရယူနိုင်သည်။ အခြားဂိမ်းအချို့ကတော့
FIFA Ultimate အဖွဲ့
Twitch Prime ပါသည့်အားကစားများမှာလက်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည် အခမဲ့ဂိမ်းများ မင်းလတိုင်းရတယ် ဒီဂိမ်းကိုကန့်သတ်ထားတဲ့အချိန်အတွက်သာရနိုင်သည်။ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်လတိုင်းပြန်စစ်ဆေးပါ။သင်ဂိမ်းတစ်ခုတောင်းဆိုသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်သင်၏စာကြည့်တိုက်သို့ထည့်ပြီးသင်၌ Amazon Prime အကောင့်ရှိသရွေ့၎င်းကိုသင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။သင်ကစားရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးမှီမည်သည့်ဂိမ်းကိုမျှသင်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အခမဲ့ဂိမ်းကစားရန်သင်၏ဘရောင်ဇာကိုဖွင့်ပြီး Twitch Prime loot စာမျက်နှာသို့သွားပါ။ ဂိမ်းများကို Prime အပိုင်းသို့အောက်သို့ဆွဲချပြီးသင်၏စာကြည့်တိုက်သို့ထည့်သွင်းလိုသည့်ဂိမ်းတိုင်းအောက်ရှိ Claim ကိုနှိပ်ပါ။သင်ဒီမှာလုပ်ပြီးပြီ မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုသင်မပြုလုပ်မီ Twitch desktop သို့မဟုတ် Amazon Games အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ။
အမေဇုံချုပ်အသင်း ၀ င်များသည်အခမဲ့ဂိမ်းကစားခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Twitch ကိုသုံးပါကသီးသန့်ဂိမ်းအချို့ကိုလစဉ်အခမဲ့အခမဲ့ကစားနိုင်သည်။ သငျသညျအခမဲ့ဂိမ်းများကိုရရှိနိုင်သည်ပေါင်းလစဉ်လတိုင်း booster packs, အရေခွံများနှင့်အခြားများစွာသော In-game ပစ္စည်းများကိုလည်းရနိုင်သည်။
ဂိမ်းကစားသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် Twitch Prime ကိုအသုံးပြုသူများအခမဲ့ပေးထားသောအခမဲ့ဂိမ်းများကိုသင်နှစ်သက်မည်မှာသေချာသည်။ သင်အခမဲ့ဂိမ်းကိုတောင်းခံ။ သင်ကစားလိုသည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး Android TV Box
Windows အတွက်အကောင်းဆုံး Android Emulators
dish network နှင့် directv အတွက်အခြားနည်းလမ်းများ
anime အတွက်အကောင်းဆုံး streaming site များ
youtube မှ android သို့သီချင်းများ download လုပ်နည်း
google home app windows 10 ကို download လုပ်ပါ